Soosaarayaasha Shirkadaha Bacriminta iyo Warshad - Soosaarayaasha Cagafyada Shiinaha
Faafiyaha Bacriminta Beeraha
Faahfaahinta Waxsoosaarka faafiyaha bacriminta maqaarka faafiyaha waxaa badanaa loo qaybiyaa hal cajalad iyo nooc cajalado labalaab ah. Faafiyaha bacriminta faashiyuhu wuxuu inta badan ka kooban yahay rack, aaladda ganaax, sanduuqa bacriminta nooca baaldiga, bacriminta aaladda hagaajinta, bacriminta faafidda iyo bacriminta aaladda wadista, sida ku cad sawirka 1. Sanduuqa bacriminta waxaa lagu rakibay qeybta sare ee mashiinka jir, iyo wadiiqo bacrimin ah ayaa la dhigay salka hoose ee sanduuqa bacriminta, iyo feer ...
Faahfaahinta alaabta Faafiyaha bacriminta aan awood lahayn waa aalad faafisa bacriminta dhulka, oo uu jiidi karo cagaf cagaf leh in ka badan 15 faras ama 18 + HP cagaf. Badiyaa waa in lagu buufiyo bacriminta aag yar. Faafiyaha digada yar wuxuu faafin karaa bacriminta kiimikada, cusbada, quruurux, waviness, haramaha, iyo digada dabiiciga ah, iyo wixii la mid ah. Faahfaahinta Feejignaanta Awoodda Weerarka 16in³ / 0.453m³ Awoodda 28in³ / 0.793m³ Qiyaasaha guud 114 * 46.5 * 30.5in / 2895 * 1181 * 775m ...
Gawaarida Bacriminta ee Iskudhafka ah
Faahfaahinta Waxsoosaarka taxanaha bacriminta ee DFC ayaa inta badan loo adeegsadaa faafinta bacriminta salka ka hor qodaalka, beero ka dib beero iyo dhul daaqsimeed. Hawlgalka fiditaanka bacriminta abuurka ayaa la qaaday. Mashiinka wuxuu leeyahay astaamaha qaab dhismeedka is haysta, codsi ballaaran oo kala duwan, waxtar sare iyo xitaa beero, taas oo aad ugu habboon isticmaalka beeraha waaweyn, cawska iyo daaqa. Shirkadeena waxay soosaartaa oo naqshadeysaa noocan faafiya digada si loo daboolo baahida ballaaran ee dadka isticmaala ...